Maxaa sababay ‘khilaafka soo kala dhex-galay’ guddiga doorashooyinka? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Maxaa sababay ‘khilaafka soo kala dhex-galay’ guddiga doorashooyinka?
Maxaa sababay ‘khilaafka soo kala dhex-galay’ guddiga doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa waxaa la sheegay in uu soo kala dhex-galay khilaaf ka dhashay soo saarista harbaaca doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya ee shalay la shaaciyey, kadib qoraal ka soo baxay guddigaasi.
Shalay ayey aheyd markii guddiga doorashooyinka uu soo saaray habraaca iyo shuruudaha doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka oo ay soo dooran doonaan xubno ergooyin ah.